ရေကြီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝေါဟာရများ - Myanmar Network
Posted by Language Republic on August 3, 2015 at 15:31 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခုအခါမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး နေရာတော်တော်များများမှာ ရေကြီးနေပါတယ်။ ရေကြီးနေတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီသင်ခန်းစာကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အောက်မှာ ရေကြီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရအတော်များများနဲ့ ၎င်းတို့ကို သုံးစွဲပုံတွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မူရင်းသင်ခန်းစာမှာ Bangkok Post မှ ဖြစ်ပါတယ်။
Talking about floods (ရေလွှမ်းမိုးမှုများအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း)
A bad flood isadisaster because it has disastrous consequences. It isatragedy for those who lose loved ones and an ordeal for those who have to live in the flooded areas.
ဆိုးဝါးသော ရေကြီးခြင်းကို ဘေးဒုက္ခ ဟုခေါ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဒုက္ခရောက်စေသော အကျိုးဆက်များ ကိုရရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်ခင်ရသူများကို ဆုံးရှုံးရသော သူများအတွက် ၎င်းသည် ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်ဆိုးကြီး ဖြစ်၍ ရေကြီးသောဒေသများတွင် နေထိုင်ရသူများအတွက်တော့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပါသည်။
Disaster (ဘေးဒုက္ခ) = ဆိုးဝါးသော မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ ရေလွှမ်းမိုးမှု (သို့) မီးလောင်မှု အစရှိသော လူအမြောက်အများကို သေစေသော (သို့) ပျက်စီဆုံးရှုံးမှု အမြောက်အများကိုဖြစ်စေသော မမျှော်လင့်ထားသည့် အဖြစ်အပျက်။
Disastrous(ဒုက္ခရောက်စေသော) = အလွန့်အလွန် ဆိုးဝါးသော (သို့) မအောင်မြင်သော
Consequences (အကျိုးဆက်များ) = တစ်စုံတစ်ရာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် ရရှိသောရလဒ်များ
Tragedy (ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်း) = အလွန်ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသော အခြေအနေ။ အများအားဖြင့် သေဆုံးခြင်းနှင့် ကြီးမားသော ဒုက္ခခံစားရခြင်းတို့ ပါဝင်သော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
Ordeal (ဒုက္ခသုက္ခ) = အလွန်တရာမနှစ်မြို့စရာကောင်းသော အတွေ့အကြုံ။ အထူးသဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ တွေ့ကြုံခံစားနေရသောအရာ။
Floods begin with heavy rain, often in the monsoon season which causes downpours, torrential rain and deluges.
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းများသည် မိုးသည်ထန်စွာ ရွာခြင်းမှအစပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့် မုတ်သုံရာသီတွင်းတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကမှတစ်ဆင့် မိုးပုဆိန်ရွာခြင်း၊ ပြင်းထန်သော မိုးရွာခြင်းနှင့် မိုးဒလဟောရွာခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါသည်။
Monsoon (မုတ်သုံရာသီ) = ပူပြင်းသောအာရှနိုင်ငံများ၏ နွေဥတု၏ မိုးသည်းထန်စွာရွာသောအချိန်။
Downpour (မိုးပုဆိန်) = အချိန်တိုတွင်း၌ မိုးများခြင်း။ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာခြင်း။
Torrential (မိုးပြင်းထန်စွာရွာခြင်း) = တစ်ဟုန်ထိုးရွာသွန်းသော မိုး(သို့)စီးဆင်းသောရေ။
Deluge (မိုးဒလဟောရွာခြင်း) = ရုတ်တရက် မိုးဒလဟောရွာခြင်း(သို့)ရုတ်တရက် ရေအမြောက်အများ စီးဆင်းခြင်း။
The excess water from the incessant rain soaks the ground, saturating it so that it can hold no more. The run-off flows into rivers which swell and overflow their banks, inundating the land around them, often submerging whole villages. Deforestation reduces the soil’s ability to absorb water and landslides and mudslides often result.
မရပ်မနားရွာသောမိုးမှ များပြားသောရေတို့သည် မြေကြီးထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားသောကြောင့် မြေကြီးသည် မိုးရေတို့ဖြင့် ပြည့်ဝသွားသည့်အတွက် နောက်ထပ်မိုးရေကို လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ထိုအခါ ပိုလျှံသော ရေများသည် မြစ်များထဲသို့ စီးဝင်သွားကာ - ထိုမြစ်တို့ထဲရှိရေကို နဂိုထက်ပိုပြည့်လာစေပြီး ၎င်းတို့၏ ကမ်းပါးများကိုရေလျှံစေသော ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေများကိုရေလွှမ်းမိုးစေကာ အများအားဖြင့် ရွာလုံးကျွတ်ရေမြှုပ်စေပါသည်။ သစ်တောပြုန်းတီးမှု သည်အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ၏ ရေကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို လျော့ပါးစေသောကြောင့် မြေပြိုခြင်း၊ ရွှံ့ပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
excess (လွန်ကဲမှု) = ပုံမှန်ထက်ကြီးမားခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုအလွန်များပြားခြင်း
incessant (မရပ်မနား) = အဆက်မပြတ်၊ မဆုံးနိုင်သော
soak (စိုစွတ်စေသည်) = အလွန်တစ်ရာရေဖြင့် စွတ်စိုအောင်ပြုလုပ်သည်
saturate (ပြည့်ဝသည်) = တစ်စုံတစ်ရာကို လုံးဝစိုရွှဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
run-off (ပိုလျှံ၍စီးသွားသောရေ) = ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရသော နယ်မြေမှရေများအဝေးသို့ စီးဆင်းသွားခြင်း
swell (မောက်တက်လာသည်) = နဂိုထက်ပိုကြီးလာခြင်း (သို့) ပိုပြည့်လာခြင်း
overflow (ပြည့်လျှံသည်) = အနားရှိမြေကို မြစ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်း
banks (ကမ်းပါး) = မြစ်တစ်စင်း၏ နံဘေးတစ်လျှောက်မြင့်နေသောမြေ။
inundate (လွှမ်းမိုးသွားသည်) = ရေလွှမ်းစေသည်။ မြုပ်စေသည်။
submerge (မြုပ်သည်) = ရေအောက်မြုပ်စေသည်။
deforestation (သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း) = ဒေသတစ်ခုတွင်းရှိ သစ်ပင်များကို ခုတ်ခြင်း(သို့)မီးရှို့ခြင်း။
soil (မြေဆီလွှာ) = မြေကြီး၏အပေါ်ယံရှိ အပင်များပေါက်နိုင်သောအရာ
absorb (စုပ်ယူသည်) = ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မျက်နှာပြင်တစ်ခုခု(သို့)နေရာတစ်ခုခုမှ အရည်(သို့) ဓာတ်ငွေ့ကိုစုပ်ယူခြင်း
landslide (မြေပြိုခြင်း) = တောင်(သို့)တောင်စောင်းတစ်ခုခုမှ မြေကြီး၊ ရွှံ့(သို့)ကျောက်ခဲ အများ အပြားပြိုကျခြင်း
mudslide (ရွှံ့ပြိုခြင်း) = တောင်နံဘေးမှရွှံ့အမြောက်အများ(သို့)တောင်စောင်းမှ မြေကြီးအစို အမြောက်အများပြိုကျလာပြီး အပျက်အစီးဖြစ်စေခြင်း (သို့) လူများ သေစေခြင်း
Lengthy rains can overwhelm the systems put in place to prevent flooding. Dams,reservoirs and other water retention sites fill, forcing the release of water. Dykes, levees and embankments often break from the surging water and raging currents, filling the surrounding land with swirling water.
ကြာရှည်ရွာသော မိုးများက ရေကြီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက်ထားရှိသော စနစ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ဆည်များ၊ ရေလှောင်ကန်များနှင့် တစ်ခြားသော ရေထိန်းသိမ်းသော နေရာများသည် ပြည့်လာပြီးရေကို အရှိန်ဖြင့် လွှတ်ထုတ်လိုက်ပါသည်။ ရေနုတ်မြောင်းများ၊ တာပေါင်ရိုးများနှင့်တမံတို့သည် တရဟော တိုးထွက်လာသောရေနှင့် ပြင်းထန်သောရေစီး ကြောင်းတို့ကြောင့် ကျိုးပဲ့ကုန်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေကိုလည်နေသောရေများဖြင့် ပြည့်နှက် စေပါသည်။
overwhelm (လွှမ်းမိုးသည်) = တစ်စုံတစ်ခု (သို့) လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အင်အား (သို့) အရှိန်ဖြင့် အနိုင် ယူခြင်း (သို့) ရှုံးနိမ့်စေခြင်း
dam (ဆည်) = ရေစီးခြင်းကို တားဆီးရန် (သို့) ရေကန်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် (သို့) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် မြစ်တစ်ခုကို ဖြတ်၍ဆောက်ထားသော တံတိုင်း
reservoir (ရေလှောင်ကန်) = ရေကိုသိုလှောင်ထားသော သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သောရေကန် (သို့) လူတို့ကဖန်တီးထားသောရေကန်
retention (ထိန်းသိမ်းခြင်း) = တစ်စုံတစ်ရာကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း (သို့) သိုလှောင်ထားခြင်း
release (လွှတ်ထုတ်ခြင်း) = တစ်နေရာရာမှ အရာတစ်ခုခုကို စီးထွက်စေခြင်း
dyke (ရေနုတ်မြောင်း) = ဒေသတစ်ခုခုကို ပင်လယ် (သို့) မြစ်ကိုမှလွှမ်းမိုးခြင်း မခံရအောင် ကာကွယ်ရန်ဆောက်ထားသော တံတိုင်း (သို့) ရေကို ထိုဒေသမှ အဝေးသို့ စီးသွားစေရန် တူးထားသောမြောင်းသွယ်
levee (တာပေါင်ရိုး) = ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မြစ်တစ်ခု၏ နံဘေး၌ ဆောက်ထားသော တံတိုင်းနိမ့်နိမ့်
embankment (တမံ) = ဒေသတစ်ခုကို မြစ်ရေ (သို့) ပင်လယ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာ ကာကွယ်ရန် ထားရှိသော မြေကြီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော (သို့) သဲအိတ်များဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော တံတိုင်းထူထူ
surging (တရဟောတိုးသည်) = လျှင်မြန်စွာ တိုးပွားလာသည်။
raging (ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရသော) = များပြားလှသော အရှိန် (သို့) ပြင်းထန်မှုဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခြင်း
current (ရေစီးကြောင်း) = မြစ်များ၊ ရေကန်များ (သို့) ပင်လယ်မှရေများ၏ ပုံမှန်စီးဆင်းသော ရေ၏ရွှေ့လျားမှု
swirling (လန်းနေသော) = စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် လျင်မြန်စွာရွေ့လျားခြင်း
Villagers in areas of danger are urged to evacuate their homes, but not all can escape and some are stranded because roads become impassable. Rescue workers and volunteers do everything they can to reach them and to take the survivors to safety or to bring in relief supplies. The victims take shelter wherever they can, often in local schools or temples.
အန္တရာယ်ရှိသော ဒေသများမှ ရွာသူရွာသားများကို အိမ်များကို စွန့်လွှတ်ပြီးဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်တိုက်တွန်း ကြပါသည်။ သို့သော် အားလုံးကတော့ မလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ လမ်းများက ဖြတ်သန်းသွားလာရန်မဖြစ်နိုင်သော ကြောင့် တချို့ကသောင်တင်၍ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက သူတို့ထံရောက်ရှိပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို ဘေးကင်းရာသို့ခေါ်သွားရန် (သို့) ကယ်ဆယ်ရေး အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ ပေးနိုင်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပါသည်။ ဒုက္ခသည်များသည် ဖြစ်နိုင်သည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ခိုလှုံကြပါသည်။များသောအားဖြင့် ကျောင်းများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်းများ၌ ဖြစ်ကြပါသည်။
evacuate (ဘေးကင်းရာသို့ပြောင်းရွှေသည်) = လုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့်နေရာတစ်နေရာကို စွန့်ခွာရခြင်း
stranded (သောင်တင်နေသည်) = တစ်ခြားနေရာသို့သွားရန် နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့် နေရာ တစ်နေရာ၌ ကျန်နေသည်
impassable (ဖြတ်သန်းသွားလာရန်ဖြစ်နိုင်သော) = လမ်းမ (သို့) လူသွားလမ်းတစ်ခုကို ပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့် (သို့) ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် သွားလာ၍မရသော
rescue (ကယ်ဆယ်သည်) = အန္တရာယ်ရှိသော (သို့) မနှစ်မြို့စရာကောင်းသော အခြေအနေမှ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကယ်ဆယ်ခြင်း
volunteer (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) = အခကြေးငွေမယူပဲ အလုပ်လုပ်ပေးသောသူ
survivor (သေကံမရောက်သက်မပျောက်ပဲ) = အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်စေသော (သို့) ပျက်စီးစေနိုင်သော ဖြစ်ရပ် ကျန်ရစ်သူ။ တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ
relief (ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း) = သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့သောနေရာများ၊ စစ်ဖြစ်သောနေရာများမှ လူများကိုကူညီရန်အတွက် ပေးသော ငွေ၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ အစရှိသည်တို့။
victims (ဒုက္ခသည်များ) = မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ရာဇ၀တ်မှုတို့ ကြောင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော၊ အနာတရ ဖြစ်ခဲ့သော (သို့) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သောသူများ
shelter (ခိုလှုံရာနေရာ) = အန္တရာယ် (သို့) ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတုတို့မှ လူတွေကို အကာ အကွယ်ပေးသော နေရာ
When the rains subside, the flood waters begin to recede, revealing the devastationthey have caused. Debris is everyway as is rubble from collapsed buildings and broken roads. Reconstruction efforts are slow and expensive and, unfortunately, they are often unfinished when the next round of flooding arrives.
မိုးစဲသွားသောအခါ ရေများလည်းပြန်ဆင်းသွားပြီး ရေကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကြီးမားသည့်အပျက်အစီးများကို မြင်စေပါသည်။ နေရာတိုင်းတွင် အကျိုးအပဲ့အပျက်အစီး အစအနများ၊ ထို့အတူနေရာအနှံ့တွင် ပြိုကျသော အဆောက်အဦးများနှင့် ကျိုးပဲ့သောလမ်းများမှ အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များ ရှိနေပါသည်။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အားထုတ်မှုမှာ နှေးကွေးပြီး စရိတ်ကြီးပါသည်။ ထို့အပြင် ကံမကောင်းလျှင် ၎င်းလုပ်ငန်းများသည် ရေကြီးခြင်းနောက်တစ်ကျော့ ပြန်လာသည့်အချိန်အထိ များသောအားဖြင့် မပြီးတတ်သေးပါ။
subside (စဲသည်) = အဆင့်နိမ့်ဆင်းသွားခြင်း၊ ပြန်သွားခြင်း၊ လျော့ပါးသွားခြင်း
recede (ကျသွားသည်) = နောက်ပြန်သွားခြင်း၊ အလှမ်းကွာသောနေရာရှိ အဝေးသို့ ရွေ့သွားခြင်း၊ လျော့ပါးခြင်း
devastation (ကြီးမားသောအပျက်အစီး) = ကျယ်ပြောသောနယ်မြေ (သို့) များပြားသော လူများတို့ အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာ (သို့) အပျက်အစီး
debris (အကျိုးအပဲ့၊ အပျက်အစီးအစအန) = ကြီးမားသောအရာတစ်ခုခု ပျက်စီးသွားသောအခါ ကျန်ခဲ့သော အကျိုးအပဲ့အပိုင်းအစများ
rubbles (အုတ်ကြိုးအုတ်ပဲ့များ) = ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသော အဆောက်အဦးများ၊ တံတိုင်းများမှ ကျန်ခဲ့သော ကျောက်ခဲနှင့် အုတ်ခဲအပိုင်းအစများ
collapse (ပြိုကျသည်) = ရုတ်တရက်ပြိုကျခြင်း၊ ရုတ်တရက်ပျက်သွားခြင်း၊ ရုတ်တရက် မှန်ကန်စွာဆက်လက်မပြုနိုင်ခြင်း (သို့) အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း။
reconstruction (ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း) = ဖျက်စီးခြင်း (သို့) ခြေမှုန်းခြင်းခံခဲ့ရသောအရာတစ်ခုကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း (သို့) ဖန်တီးခြင်း
Bangkokpost.com မှ TERRY FREDRICKSON ၏ Flood-related vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ တဈနိုငျငံလုံး နရောတျောတျောမြားမြားမှာ ရကွေီးနပေါတယျ။ ရကွေီးနတေဲ့အကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွရာမှာ အသုံးပွုနိုငျရနျ ဒီသငျခနျးစာကို တငျပေးလိုကျတာပါ။ အောကျမှာ ရကွေီးခွငျးနှငျ့ ပတျသကျသော ဝေါဟာရအတျောမြားမြားနဲ့ ၎င်းငျးတို့ကို သုံးစှဲပုံတှေ ဖျောပွထားပါတယျ။ မူရငျးသငျခနျးစာမှာ Bangkok Post မှ ဖွဈပါတယျ။
Talking about floods (ရလှေမျးမိုးမှုမြားအကွောငျး ဆှေးနှေးခွငျး)
ဆိုးဝါးသော ရကွေီးခွငျးကို ဘေးဒုက်ခ ဟုချေါပါသညျ။ အကွောငျးမှာ ဒုက်ခရောကျစသေော အကြိုးဆကျမြား ကိုရရှိလို့ပဲ ဖွဈပါသညျ။ ခဈြခငျရသူမြားကို ဆုံးရှုံးရသော သူမြားအတှကျ ၎င်းငျးသညျ ဝမျးနညျးကွကှေဲဖှယျရာအဖွဈဆိုးကွီး ဖွဈ၍ ရကွေီးသောဒသေမြားတှငျ နထေိုငျရသူမြားအတှကျတော့ တုနျလှုပျခွောကျခွားဖှယျရာ အတှအေ့ကွုံ ဖွဈပါသညျ။
Disaster (ဘေးဒုက်ခ) = ဆိုးဝါးသော မတျောတဆထိခိုကျမှု၊ ရလှေမျးမိုးမှု (သို့) မီးလောငျမှု အစရှိသော လူအမွောကျအမြားကို သစေသေော (သို့) ပကျြစီဆုံးရှုံးမှု အမွောကျအမြားကိုဖွဈစသေော မမြှျောလငျ့ထားသညျ့ အဖွဈအပကျြ။
Disastrous(ဒုက်ခရောကျစသေော) = အလှနျ့အလှနျ ဆိုးဝါးသော (သို့) မအောငျမွငျသော
Consequences (အကြိုးဆကျမြား) = တဈစုံတဈရာ၏ အကြိုးသကျရောကျမှုကွောငျ့ ရရှိသောရလဒျမြား
Tragedy (ကံဆိုးမိုးမှောငျကခြွငျး) = အလှနျကွကှေဲ ဝမျးနညျးဖှယျရာကောငျးသော အခွအေနေ။ အမြားအားဖွငျ့ သဆေုံးခွငျးနှငျ့ ကွီးမားသော ဒုက်ခခံစားရခွငျးတို့ ပါဝငျသော ကွောငျ့ဖွဈပါသညျ။
Ordeal (ဒုက်ခသုက်ခ) = အလှနျတရာမနှဈမွို့စရာကောငျးသော အတှအေ့ကွုံ။ အထူးသဖွငျ့ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ တှကွေုံ့ခံစားနရေသောအရာ။
ရလှေမျးမိုးခွငျးမြားသညျ မိုးသညျထနျစှာ ရှာခွငျးမှအစပွုပါသညျ။ အထူးသဖွငျ့ မုတျသုံရာသီတှငျးတှငျ ဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးကမှတဈဆငျ့ မိုးပုဆိနျရှာခွငျး၊ ပွငျးထနျသော မိုးရှာခွငျးနှငျ့ မိုးဒလဟောရှာခွငျးတို့ ဖွဈလာပါသညျ။
Monsoon (မုတျသုံရာသီ) = ပူပွငျးသောအာရှနိုငျငံမြား၏ နှဥေတု၏ မိုးသညျးထနျစှာရှာသောအခြိနျ။
Downpour (မိုးပုဆိနျ) = အခြိနျတိုတှငျး၌ မိုးမြားခွငျး။ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာခွငျး။
Torrential (မိုးပွငျးထနျစှာရှာခွငျး) = တဈဟုနျထိုးရှာသှနျးသော မိုး(သို့)စီးဆငျးသောရေ။
Deluge (မိုးဒလဟောရှာခွငျး) = ရုတျတရကျ မိုးဒလဟောရှာခွငျး(သို့)ရုတျတရကျ ရအေမွောကျအမြား စီးဆငျးခွငျး။
မရပျမနားရှာသောမိုးမှ မြားပွားသောရတေို့သညျ မွကွေီးထဲသို့ စိမျ့ဝငျသှားသောကွောငျ့ မွကွေီးသညျ မိုးရတေို့ဖွငျ့ ပွညျ့ဝသှားသညျ့အတှကျ နောကျထပျမိုးရကေို လကျခံနိုငျခွငျးမရှိတော့ပါ။ ထိုအခါ ပိုလြှံသော ရမြေားသညျ မွဈမြားထဲသို့ စီးဝငျသှားကာ - ထိုမွဈတို့ထဲရှိရကေို နဂိုထကျပိုပွညျ့လာစပွေီး ၎င်းငျးတို့၏ ကမျးပါးမြားကိုရလြှေံစသေော ကွောငျ့ပတျဝနျးကငျြရှိ မွမြေားကိုရလှေမျးမိုးစကော အမြားအားဖွငျ့ ရှာလုံးကြှတျရမွှေုပျစပေါသညျ။ သဈတောပွုနျးတီးမှု သညျအပျေါယံမွဆေီလှာ၏ ရကေိုစုပျယူနိုငျစှမျးကို လြော့ပါးစသေောကွောငျ့ မွပွေိုခွငျး၊ ရှံ့ပွိုခွငျးမြား ဖွဈပျေါပါသညျ။
excess (လှနျကဲမှု) = ပုံမှနျထကျကွီးမားခွငျး၊ တဈစုံတဈခုအလှနျမြားပွားခွငျး
incessant (မရပျမနား) = အဆကျမပွတျ၊ မဆုံးနိုငျသော
soak (စိုစှတျစသေညျ) = အလှနျတဈရာရဖွေငျ့ စှတျစိုအောငျပွုလုပျသညျ
saturate (ပွညျ့ဝသညျ) = တဈစုံတဈရာကို လုံးဝစိုရှဲအောငျပွုလုပျခွငျး
run-off (ပိုလြှံ၍စီးသှားသောရေ) = ရလှေမျးမိုးခွငျးခံရသော နယျမွမှေရမြေားအဝေးသို့ စီးဆငျးသှားခွငျး
swell (မောကျတကျလာသညျ) = နဂိုထကျပိုကွီးလာခွငျး (သို့) ပိုပွညျ့လာခွငျး
overflow (ပွညျ့လြှံသညျ) = အနားရှိမွကေို မွဈရလှေမျးမိုးခွငျး
banks (ကမျးပါး) = မွဈတဈစငျး၏ နံဘေးတဈလြှောကျမွငျ့နသေောမွေ။
inundate (လှမျးမိုးသှားသညျ) = ရလှေမျးစသေညျ။ မွုပျစသေညျ။
submerge (မွုပျသညျ) = ရအေောကျမွုပျစသေညျ။
deforestation (သဈတောပွုနျးတီးခွငျး) = ဒသေတဈခုတှငျးရှိ သဈပငျမြားကို ခုတျခွငျး(သို့)မီးရှို့ခွငျး။
soil (မွဆေီလှာ) = မွကွေီး၏အပျေါယံရှိ အပငျမြားပေါကျနိုငျသောအရာ
absorb (စုပျယူသညျ) = ပတျဝနျးကငျြရှိ မကျြနှာပွငျတဈခုခု(သို့)နရောတဈခုခုမှ အရညျ(သို့) ဓာတျငှကေို့စုပျယူခွငျး
landslide (မွပွေိုခွငျး) = တောငျ(သို့)တောငျစောငျးတဈခုခုမှ မွကွေီး၊ ရှံ့(သို့)ကြောကျခဲ အမြား အပွားပွိုကခြွငျး
mudslide (ရှံ့ပွိုခွငျး) = တောငျနံဘေးမှရှံ့အမွောကျအမြား(သို့)တောငျစောငျးမှ မွကွေီးအစို အမွောကျအမြားပွိုကလြာပွီး အပကျြအစီးဖွဈစခွေငျး (သို့) လူမြား သစေခွေငျး
ကွာရှညျရှာသော မိုးမြားက ရကွေီးခွငျးကို ကာကှယျရနျအတှကျထားရှိသော စနဈမြားကို ပကျြစီးစနေိုငျပါသညျ။ ဆညျမြား၊ ရလှေောငျကနျမြားနှငျ့ တဈခွားသော ရထေိနျးသိမျးသော နရောမြားသညျ ပွညျ့လာပွီးရကေို အရှိနျဖွငျ့ လှတျထုတျလိုကျပါသညျ။ ရနေုတျမွောငျးမြား၊ တာပေါငျရိုးမြားနှငျ့တမံတို့သညျ တရဟော တိုးထှကျလာသောရနှေငျ့ ပွငျးထနျသောရစေီး ကွောငျးတို့ကွောငျ့ ကြိုးပဲ့ကုနျပွီး ပတျဝနျးကငျြရှိ မွကေိုလညျနသေောရမြေားဖွငျ့ ပွညျ့နှကျ စပေါသညျ။
overwhelm (လှမျးမိုးသညျ) = တဈစုံတဈခု (သို့) လူတဈဦးတဈယောကျကို အငျအား (သို့) အရှိနျဖွငျ့ အနိုငျ ယူခွငျး (သို့) ရှုံးနိမျ့စခွေငျး
dam (ဆညျ) = ရစေီးခွငျးကို တားဆီးရနျ (သို့) ရကေနျတဈခုတညျဆောကျရနျ (သို့) လြှပျစဈဓာတျအား ထုတျလုပျမှုကို အထောကျအကူပွုရနျအတှကျ မွဈတဈခုကို ဖွတျ၍ဆောကျထားသော တံတိုငျး
reservoir (ရလှေောငျကနျ) = ရကေိုသိုလှောငျထားသော သဘာဝအလြောကျဖွဈပျေါသောရကေနျ (သို့) လူတို့ကဖနျတီးထားသောရကေနျ
retention (ထိနျးသိမျးခွငျး) = တဈစုံတဈရာကို ထိနျးသိမျးထားခွငျး (သို့) သိုလှောငျထားခွငျး
release (လှတျထုတျခွငျး) = တဈနရောရာမှ အရာတဈခုခုကို စီးထှကျစခွေငျး
dyke (ရနေုတျမွောငျး) = ဒသေတဈခုခုကို ပငျလယျ (သို့) မွဈကိုမှလှမျးမိုးခွငျး မခံရအောငျ ကာကှယျရနျဆောကျထားသော တံတိုငျး (သို့) ရကေို ထိုဒသေမှ အဝေးသို့ စီးသှားစရေနျ တူးထားသောမွောငျးသှယျ
levee (တာပေါငျရိုး) = ရလှေမျးမိုးခွငျးကို ကာကှယျရနျအတှကျ မွဈတဈခု၏ နံဘေး၌ ဆောကျထားသော တံတိုငျးနိမျ့နိမျ့
embankment (တမံ) = ဒသေတဈခုကို မွဈရေ (သို့) ပငျလယျရလှေမျးမိုးခွငျးမှာ ကာကှယျရနျ ထားရှိသော မွကွေီးဖွငျ့ပွုလုပျထားသော (သို့) သဲအိတျမြားဖွငျ့ ပွုလုပျ ထားသော တံတိုငျးထူထူ
surging (တရဟောတိုးသညျ) = လြှငျမွနျစှာ တိုးပှားလာသညျ။
raging (ထိနျးမနိုငျသိမျးမရသော) = မြားပွားလှသော အရှိနျ (သို့) ပွငျးထနျမှုဖွငျ့ ဖွဈပကျြခွငျး
current (ရစေီးကွောငျး) = မွဈမြား၊ ရကေနျမြား (သို့) ပငျလယျမှရမြေား၏ ပုံမှနျစီးဆငျးသော ရေ၏ရှလြေ့ားမှု
swirling (လနျးနသေော) = စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဍာနျဖွငျ့ လငျြမွနျစှာရှလြေ့ားခွငျး
အန်တရာယျရှိသော ဒသေမြားမှ ရှာသူရှာသားမြားကို အိမျမြားကို စှနျ့လှတျပွီးဘေးကငျးရာသို့ ရှပွေ့ောငျးရနျတိုကျတှနျး ကွပါသညျ။ သို့သျော အားလုံးကတော့ မလှတျမွောကျနိုငျပါ။ လမျးမြားက ဖွတျသနျးသှားလာရနျမဖွဈနိုငျသော ကွောငျ့ တခြို့ကသောငျတငျ၍ကနျြခဲ့ပါသညျ။ ကယျဆယျရေးဝနျထမျးမြားနှငျ့ စတေနာ့ဝနျထမျးမြားက သူတို့ထံရောကျရှိပွီး အသကျရှငျကနျြရဈသူမြားကို ဘေးကငျးရာသို့ချေါသှားရနျ (သို့) ကယျဆယျရေး အထောကျအပံ့ ပစ်စညျးမြား ပေးနိုငျရနျ အစှမျးကုနျကွိုးစားကွပါသညျ။ ဒုက်ခသညျမြားသညျ ဖွဈနိုငျသညျ့ မညျသညျ့နရောတှငျမဆို ခိုလှုံကွပါသညျ။မြားသောအားဖွငျ့ ကြောငျးမြားနှငျ့ ဘုနျးကွီးကြောငျး၊ ဘုရားကြောငျးမြား၌ ဖွဈကွပါသညျ။
evacuate (ဘေးကငျးရာသို့ပွောငျးရှသေညျ) = လုံခွုံမှုမရှိသောကွောငျ့နရောတဈနရောကို စှနျ့ခှာရခွငျး
stranded (သောငျတငျနသေညျ) = တဈခွားနရောသို့သှားရနျ နညျးလမျးမရှိသောကွောငျ့ နရော တဈနရော၌ ကနျြနသေညျ
impassable (ဖွတျသနျးသှားလာရနျဖွဈနိုငျသော) = လမျးမ (သို့) လူသှားလမျးတဈခုကို ပိတျဆို့နခွေငျးကွောငျ့ (သို့) ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတုအခွအေနကွေောငျ့ သှားလာ၍မရသော
rescue (ကယျဆယျသညျ) = အန်တရာယျရှိသော (သို့) မနှဈမွို့စရာကောငျးသော အခွအေနမှေ တဈစုံတဈယောကျကို ကယျဆယျခွငျး
volunteer (စတေနာ့ဝနျထမျး) = အခကွေးငှမေယူပဲ အလုပျလုပျပေးသောသူ
survivor (သကေံမရောကျသကျမပြောကျပဲ) = အသကျဆုံးရှုံးနိုငျစသေော (သို့) ပကျြစီးစနေိုငျသော ဖွဈရပျ ကနျြရဈသူ။ တဈခုဖွဈပွီးနောကျ အသကျရှငျကနျြရဈသူ
relief (ကယျဆယျရေးပစ်စညျး) = သဘာဝဘေးအန်တရာယျကရြောကျခဲ့သောနရောမြား၊ စဈဖွဈသောနရောမြားမှ လူမြားကိုကူညီရနျအတှကျ ပေးသော ငှေ၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ အစရှိသညျတို့။
victims (ဒုက်ခသညျမြား) = မတျောတဆထိခိုကျမှု၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ၊ ရာဇဝတျမှုတို့ ကွောငျ့ တဈနညျးနညျးဖွငျ့ အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရသော၊ အနာတရ ဖွဈခဲ့သော (သို့) ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့သောသူမြား
shelter (ခိုလှုံရာနရော) = အန်တရာယျ (သို့) ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတုတို့မှ လူတှကေို အကာ အကှယျပေးသော နရော
မိုးစဲသှားသောအခါ ရမြေားလညျးပွနျဆငျးသှားပွီး ရကွေီးမှုကွောငျ့ဖွဈပျေါခဲ့သော ကွီးမားသညျ့အပကျြအစီးမြားကို မွငျစပေါသညျ။ နရောတိုငျးတှငျ အကြိုးအပဲ့အပကျြအစီး အစအနမြား၊ ထို့အတူနရောအနှံ့တှငျ ပွိုကသြော အဆောကျအဦးမြားနှငျ့ ကြိုးပဲ့သောလမျးမြားမှ အုတျကြိုးအုတျပဲ့မြား ရှိနပေါသညျ။ ပွနျလညျတညျဆောကျရေး အားထုတျမှုမှာ နှေးကှေးပွီး စရိတျကွီးပါသညျ။ ထို့အပွငျ ကံမကောငျးလြှငျ ၎င်းငျးလုပျငနျးမြားသညျ ရကွေီးခွငျးနောကျတဈကြော့ ပွနျလာသညျ့အခြိနျအထိ မြားသောအားဖွငျ့ မပွီးတတျသေးပါ။
subside (စဲသညျ) = အဆငျ့နိမျ့ဆငျးသှားခွငျး၊ ပွနျသှားခွငျး၊ လြော့ပါးသှားခွငျး
recede (ကသြှားသညျ) = နောကျပွနျသှားခွငျး၊ အလှမျးကှာသောနရောရှိ အဝေးသို့ ရှသှေ့ားခွငျး၊ လြော့ပါးခွငျး
devastation (ကွီးမားသောအပကျြအစီး) = ကယျြပွောသောနယျမွေ (သို့) မြားပွားသော လူမြားတို့ အပျေါ သကျရောကျမှုရှိသော ပကျြစီးမှုအတိုငျးအတာ (သို့) အပကျြအစီး
debris (အကြိုးအပဲ့၊ အပကျြအစီးအစအန) = ကွီးမားသောအရာတဈခုခု ပကျြစီးသှားသောအခါ ကနျြခဲ့သော အကြိုးအပဲ့အပိုငျးအစမြား
rubbles (အုတျကွိုးအုတျပဲ့မြား) = ဖကျြဆီးခွငျးခံခဲ့ရသော အဆောကျအဦးမြား၊ တံတိုငျးမြားမှ ကနျြခဲ့သော ကြောကျခဲနှငျ့ အုတျခဲအပိုငျးအစမြား
collapse (ပွိုကသြညျ) = ရုတျတရကျပွိုကခြွငျး၊ ရုတျတရကျပကျြသှားခွငျး၊ ရုတျတရကျ မှနျကနျစှာဆကျလကျမပွုနိုငျခွငျး (သို့) အလုပျမလုပျနိုငျခွငျး။
reconstruction (ပွနျလညျတညျဆောကျခွငျး) = ဖကျြစီးခွငျး (သို့) ခွမှေုနျးခွငျးခံခဲ့ရသောအရာတဈခုကို ပွနျလညျ တညျဆောကျခွငျး (သို့) ဖနျတီးခွငျး
Bangkokpost.com မှ TERRY FREDRICKSON ၏ Flood-related vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by mohmoh on August 3, 2015 at 16:15
Permalink Reply by April Laylay on August 3, 2015 at 17:44
Thanks so much! It's very useful for us.
Permalink Reply by Aye Nyein Thu on August 3, 2015 at 18:26
Thx q very much!
Permalink Reply by Aung Myat Ko Ko on August 4, 2015 at 20:39
Thanksalot. It very useful.
Permalink Reply by Nyo Yi on August 6, 2015 at 7:24
Permalink Reply by Sai Sai Aung Khaing Htet on August 6, 2015 at 16:58
Thanksalot as it is very helpful
Permalink Reply by Chit Khoon So on August 7, 2015 at 11:17
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကိုလည်း တင်ပေးပါဦးရှင်
Permalink Reply by San Thein on August 8, 2015 at 16:18
It´s helpful for me
Permalink Reply by kyawkyawwin on August 10, 2015 at 12:36
Thank you, very increase vocabulary for me.
Permalink Reply by hlaing hlaing win on August 10, 2015 at 16:02
Permalink Reply by unoqueen on August 10, 2015 at 23:40
Permalink Reply by houng ning on October 19, 2015 at 14:33
make improveavocabulary!thanks